Wararkii ugu dambeeyay Ciidamada Dowladda oo weeraray hotel ay degan yihiin madaxdii hore | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay Ciidamada Dowladda oo weeraray hotel ay degan yihiin madaxdii...
Wararkii ugu dambeeyay Ciidamada Dowladda oo weeraray hotel ay degan yihiin madaxdii hore
Ciidamada Dowladda Somaliya ayaa goor dambe oo caawa ahayd weeraray Hotel Maa’ida ee Magaalada Muqdisho, oo ay degan yihiin Madaxweyne-yaashii hore ee dalka, Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno kale oo ka tirsan Midowga Musharaxiinta.
Dagaalka ayaa bilowday, ka dib markii Ciidamada Dowladda ay weerareen ciidan taabacsan Midowga Musharaxiinta oo ku sugan aagga Taalada Daljirka Dahsoon, halkaaso uu Hotel Maa’ida (Ex Naasa Hablood 2) ku yaalo.
Dagaalka oo hubka noocyadiisa kala duwan leesku adeegsaday ayaa qalqal ku abuuray bulshada ku dhaqan Degmooyinka Boondheere, Shangaani, Xamar Weyne, Warta Nabadda iyo degmooyinka kale ee ku dhow dhow.
Dagaalka ayaa si iskiis ah u joogsaday, waxayna labada dhinac ku kala sugan yihiin Taalada Daljirka Dahsoon iyo Isgoyska Jubba ee Degmada Boondheere.
Madaxweynihii hore ee Somaliya, Shariif Sheekh Axmed ayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay in uu bixiyay amarka lagu soo weeraray.
Xasan Cali Khayre, Ra’iisal Wasaarihii hore ee Somaliya ahna Musharax Madaxweyne ayaa dhankiisa waxaa uu yiri “Guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqayaa inay adkeeyaan midnimadooda bulsho, ayna si wadajir ah meel uga soo wada jeestaan xukunka ku dhisan kali-talisnimada ee dhaxalkiisa aan horey u soo aragnay.”
Dowladda Federaalka ayaan iyadu ka hadlin weerarka ay ciidamadeeda ku qaadeen Maa’ida Hotel.
Previous articleTirada dadka COVID-19 ugu dhimanaya Muqdisho oo kordheysa
Next articleWasiirka Amniga oo si indho la’aan ah uga hadlay weerarkii Hotel Maa’ida